अस्पतालको बेडमा जीवन-मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेकी मुस्कान ! - Birgunj Sanjalअस्पतालको बेडमा जीवन-मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेकी मुस्कान ! - Birgunj Sanjalअस्पतालको बेडमा जीवन-मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेकी मुस्कान ! - Birgunj Sanjal
अस्पतालको बेडमा जीवन-मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेकी मुस्कान !
२५ भाद्र २०७६, बुधबार २३:३०
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउन अभिभावकको आग्रह
दिनभरको घरायसी कामले लखतरान परि रातिदेखि सन्चो नभएर घरमै सुतिरहेकी आमा सहनाजलाई एक्कासी छोरीमाथि एसिड प्रहार भएको खबर सुन्नसाथ पृथ्वी हल्लियजस्तो भयो ।
द नेपालटपसँग कुरा गर्दै मुस्कानको पीडा सबै नेपाली चेलीहरुको पीडा भएको बताउँदै रसुलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पतालमा आएर आफ्नी छोरीलाई भेट्नका लागि आवाह्वान गरे ।
मुस्कानको कम्मरमाथिको सबै शरीर पट्टीले बाँधिएको छ भने कम्मरमुनीको भागलाई पातलो ब्ल्यांकेटले छोपिएको छ । अनुहारको दाहिने गालामा एसिडले जलाएको छ ।
छेउमै उभिएकी आमा सहनाज भने आँखाभरी आशु लिएर मात्र कुरा सुनिरहेकी थिइन् ।
मुस्कानका बुबा भन्दै थिए आज मुस्कानलाई आक्रमण गर्यो भोलि यस्ता अरु मुस्कानमाथि यस्तो आक्रमण नहोस् ।
‘केही समयपछि मैले छोरीलाई सोधे तिमीलाई ति केटाहरुले जिस्काउछन् कि जिस्काउँदैनन् । छोरीले भनी नाइ जिस्काउदैनन् ।’ उनले बरबराउदो स्वरमा भने, ‘यस्तो दिन आउछ भन्ने थाहा पाएको भए तिनीहरुलाई त्यसै छोड्ने थिइन । तर, उनीहरु सुध्रिएका रहेनछन् ।
उनीहरुको त्यो ढुक्कपनाले दिगो भने पाउन सकेनन् । छोरी मुस्कानको अनुहारमा कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्यो । आफ्नै गाउँले दाजुभाईको आक्रमणकोसिकार भइन् मुस्कान् ।
उनीहरुको त्यो ढुक्कपनाले दिगो भने पाउन सकेन । छोरी मुस्कानको अनुहारमा कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्यो । आफ्नै गाउँले दाजुभाईको आक्रमणकोसिकार भइन् मुस्कान् ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउन आग्रह
०७६ सालयता ५ महिनामा एसिड आक्रमणका दुई घटना सार्वजनिक भएका छन् । गत जेठ १ गते बुधबार राति काठमाडौंको कालोपुलमा २२ वर्षीया युवतीमाथि आफ्नै श्रीमानले एसिड प्रहार गरेका थिए । त्यसको चार महिनापछि मुस्कानमाथि आक्रमण भयो । यस्ता घटनाले छोरीचेलीलाई घरबाट बाहिर निस्कनै डर भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयम् यसमा गम्भिर हुनुपर्ने उनले बताए ।
रसुलले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भेटेर आफुलाई हौसला दिँदै मुस्कानको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् ।
सांसद सधै आउछन् मेयर आएन